Ku rar Xarafka ugu dambeeyay ee Nooca adoo adeegsanaya Mashiinka WordPress adoo adeegsanaya jQuery load | Martech Zone
Ku shub Qoraalladii Ugu Dambeeyay Nooca adoo adeegsanaya Menu-ka WordPress adoo adeegsanaya jQuery load
Arbacada, Janaayo 9, 2013 Arbacada, Maarso 18, 2015 Douglas Karr
Haddii aad booqatay qaar ka mid ah baloogyada waaweyn ee halkaas ku yaal sida Mashable, waxaad ogaan kartaa inay leeyihiin nidaam aad u fiican oo menu ah oo hoos u dhacaya oo ku siinaya inaad aragti ka hesho qoraallada ugu dambeeya ee laga soo qoro qayb kasta. Si loo hubiyo in boggu aanu waligiis qaadanaynin, waxay rakibayaan waxyaabahaas adoo adeegsanaya Ajax… waxayna horay u sii dhejinayaan markii bogga si buuxda loo rakibo.
Waxaan rabnay inaan halkaan ku sameeyno Martech Zone. Si aan waxoogaa aragti ah uga siiyo qaybaha aan hayno, waxaan doonayay inaan ku muujiyo qoraallo mid kasta oo ka mid ah. Waxaan si fiican u baranay WordPress, WordPress API iyo jQuery laakiin may ahayn ilaa aan ka helay maqaal ku saabsan Keenista Qoraallada Qaybta adoo adeegsanaya jQuery in aan helnay xal fiican.
Casharradu waxay ku talaabsataa adeegsadaha iyada oo la abuurayo shey si firfircoon ugu soo jiidaya qoraalada, ka dibna sida loo dhiso xiriiriyeyaal bilaabi kara codsiga. Way fududaan laheyd hadaan rabno inaan sameysano xiriiryo kooban, laakiin waxaan runti dooneynay inaan ka faa'iideysano WordPress 'oo lagu dhisay menu-ga. Nasiib darrose annaga, xiriiriyeyaasha menu-yada 'WordPress' waxay soo saareen lambarro markii aad ku darto oo aad ka saarto waxyaabaha ku jira liiska… laakiin dhab ahaan ma hayaan wax macluumaad ah oo ku saabsan qaybta aad rabto inaad jiidato oo aad u dhaafto wicitaankaaga Ajax.
Si aad si sax ah ugu calaamadeyso waxyaabaha liiska ku jira, waxaan ku darney koodhka WPreso, Ku dar bogga / post post slug fasalada sheyga.
Kaliya hal dhibaato… waxay u shaqeysaa bogga ama boostada, laakiin dhab ahaan uma shaqeyn Qeybta! Marka waxaan ku cusbooneysiinay dalabka ku saabsan isugeynta:
Oo wuxuu ku daray shaqada WPRecipes, Xeeladda WordPress: Ku hel isugeynta qaybta adoo adeegsanaya aqoonsi nooca ah, si aad dib ugu soo celiso isugeynta qaybta ku jirta astaamaha xogta ee menu-ka hagista.
Sidaas… mahadsanid dadaallada iskaashiga ah ee 3 bogag WordPress ah iyo xoogaa isku hagaajin ah oo aan ka helnay jQuery guru at DK New Media, Stephen Coley (loogu talagalay jilitaanka liiska), waxaan leenahay nidaam submenu aad u fiican!
Tags: qaybta slugfarriimaha ugu dambeeyay qayb ahaansu'aal_postswordpress ajax menuwordpress ajax submenumenu wordpressmenu wordpresswp_nav_menu
Warqad Cad: Hab-dhaqanka ugu wanaagsan ee qorista soo jeedinta iibka
Taariikhda Farsamada Iibka
Jan 28, 2013 at 2: 07 AM
Miyaad tusaysaa ama ku iibinaysaa lambarkan meel? Waxaan isku dayay inaan ka dhigo mid shaqeynaya laakiin ma garan karo sida loo geliyo wp_nav_menu iyadoo la adeegsanayo qalabka socodka ...
Jan 28, 2013 at 9: 45 AM
@ facebook-526543707: disqus Waxaan ku xirmay koodhkii aan adeegsaday. Maxaad isku dayeysaa inaad wax ka beddesho?
Jan 29, 2013 at 4: 57 AM
Waad ku mahadsantahay jawaabta :). Waa hagaag waxay ku shaqeyneysaa qeybtayda koowaad, laakiin tan kaliya, uma muuqan karo inaan raadinayo sida loogu celiyo habka qayb-hoosaadyo kasta (heerka 2 ee menu-kayga), iyo inaan ka joojiyo inay ka shaqeyso heerka 1 ee liiskayga:
Feb 4, 2013 markay ahayd 6:46 PM
Qaabka aan u sameeyay waxay ahayd inaan ku daro walxo xog ah shayga liiska ku qoran ka dibna ku lifaaq qodobkaas su'aasha.
Feb 24, 2013 markay ahayd 12:42 PM
Mahadsanid, taas waan iska indhatiray, hadda way shaqeysaa 🙂
Mar 17, 2015 at 11: 07 AM
ma heli karo wax koodh ah oo la isticmaalo
isku xidhka koowaad ma shaqeeyo
Mar 18, 2015 at 12: 33 PM
Waxaan cusbooneysiiyay xiriiriyaha tusaalayaal cusub - ii sheeg haddii taasi shaqeyneyso.
Apr 12, 2021 at 1: 47 PM
Waa salaaman tahay! Tani waa sida saxda ah waxaan raadinayo mashruuc cusub. Fursad kasta oo la wadaago koodhka?